HAMBALYO “GOBANIMAADAYADA GEYSHKAA HAYEE WAA INAAN GUDNAA ………………………” – XAMAR POST
HAMBALYO “GOBANIMAADAYADA GEYSHKAA HAYEE WAA INAAN GUDNAA ………………………”
By Mohamed Abdi On Apr 4, 2021
Mas’uulkii iyo muwaadinkii Soomaaliyeed ee qiiro waddaninimo ay ku jirto waa inuu gartaa qiimaha uu ciidanka XDS uu ugu fadhiyo dadka, dalka iyo diinta.
Wacdarihii uu ciidanku dhigay iyo jabkii iyo halaaggii cadawga ka raacay dagaalkii habeen hore (03.04.2021) ee Awdheegle iyo Bariirre ee Gobolka Sh/Hoose waa taariikh lama illaawaan ah. Argagixisada Al Shabaab ayaa isku dayday inay weerarro gaadmo ah ku soo qaaddo xarumaha ciidanka XDS ee labada magaalo ee kor ku xusan, iyadoo illowsan in ciidamada dalku ay daqiiqad kasta heegan ku jiraan, ishana ku hayaan dhaqdhaqaaqa cadawga. Meedadka cadawgu waa ku tuban cadceedda hoosteeda iyagoo boqolaal gaaraya, hubka iyo agabka laga furtayna la wada arkay; waana guulo is daba joog ah oo XDS looga bartay, hadafkuna yahay in cadawga laga sifeeyo meelaha uu ku dhuumaaleysanayo.
Haddaba, hambalyo iyo bogaadin ayaan u dirayaa geesiyaasha ciidanka XDS iyo talisyadooda uu hoggaanka u hayo Gen. Odawaa Yuusuf Raage Taliyaha Xoogga Dalka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaan qaddarin iyo mahadcelin u gudbinayaa dowladda Madaxweyne Farmaajo oo geed dheer iyo mid gaaban u fuushay dhismaha, tayeynta iyo taakulaynta ciidamada qalabka sida, halka dowladdii ka horreysay ay dayacday ama qiimo darreysay xuquuqda ciidamada iyo shaqaalaha dalka.
Soomaaliyeey ogaada dal iyo dowlad aan ciidan lahayn gobanimadooda iyo madaxbannaanidoodu halis ayey ku jirtaaye. Sidaas darteed, aan u wada istaagno (dowlad iyo shacab) dhiirrigelinta iyo garabsiinta ciidamada si ay u gutaan waajibaadka saaran.
XDS HA NOOLAADO
Ciidamada Xoogga Oo Al Shabaab Kala wareegay deegaano dhowr ah
Wararkii ugu dambeeyey Shirka Afisiyooni ka socda maalintii Labaad